musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Italy Tourism Ministry pakupedzisira vadzoka vanoti BMT Mutungamiri
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Investments • Italy Kuputsa Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
LR - De Negri naGaravaglia kuItaly Tourism chiitiko BMT
Iyo yekuvhurika-uye-mukati-yemunhu vhezheni yeMediterranean Tourism Exchange BMT muNaples, kusvika parizvino ndiyo yega yekufamba mart iyo yaive yakavhurika kuruzhinji muItari muna2021.
Mhedzisiro yeMediterranean Tourism Exchange yakaitwa kubva musi wa18 Chikumi kusvika 20, 2021, yanga yakatarisirwa pamusoro pevaratidziri uye kunyanya nyanzvi dzinopinda kubva kuruzhinji.
Gurukota rezvekushanya rakarumbidza Mutungamiriri weBMT nekutungamira chirongwa chakakosha ichi.
Gurukota Garavaglia vakavimbisa kuunza mutemo kuhurumende wekubvisa mutero kumasangano evashanyi pamwe nevashandi venguva yekushanya.
Gurukota rezvekushanya, Massimo Garavaglia aivepo pakuvhurwa kweBMT uye akarumbidza mutsigiri wechiitiko ichi uye Mutungamiri weBMT, Angel de Negri, nehushingi hwekuita danho rakakosha riitike. Gurukota rakavimbisa nezve mukana wekunonoka kupora kutenda zvakare kune chirongwa chekudzivirira. Akawedzera zvakare vimbiso pamubhadharo wemutero wevashandi vanobatira vashanyi vashanyi pakutanga kwegore ra2021 nekuwedzera kuzvipira kusvika pamakore matatu.
Mukupindura zvikumbiro zvakaitwa kune iyo Itari Ministry of Tourism nerutsigiro rwemari kubva kumasangano evashanyi, Garavaglia, yaona kukosha kwedambudziko iri, rakazvipira rakakosha kuti riwedzere kubvisirwa mutero kwakatopihwa mune dzimwe nzvimbo dzebasa uye kuti ushandisewo kune vanoona mwaka vevashanyi. Akavimbisa kuendesa kuhurumende shanduko uye nekuona kushanda kwayo nekukurumidza sezvazvinogona. Chinangwa chingave chekupa mutero mutero uyo unobatsira mukukurudzira kutsvaga kwakanaka uye kurapwa kwemihoro, "zvinokwikwidza nemari yehugari hwemo."
Gurukota Garavaglia vakawedzera kuti: "Istat [iyo Italian National Institute of Statistics] inotarisira kukura kweGDP munaGunyana kuwedzera +4.7 muzana, uye ndivo vashanyi vekushanya vanoita GDP. Isu muhurumende tinofanira kuvabatsira. Tinofanirwa kuvhura kuyerera, nekuti zvinotibvumidza kuve nevatengi. Iye zvino nerudzi rwekupfuura, isu tine yakajeka mitemo uye kuwedzera kune Schengen, United States, Canada, Israel inosanganisirwa. Zvichakadaro, isu tinofanirwa kutanga kuwedzera mwaka wevashanyi munguva nenzvimbo. Uyezve kune kubheja kukuru kwekudzoreredza: 2.4 bhiriyoni inova 5 nemagetsi. ”
Pier Ezhaya, Mutungamiri weASTOI (wezvekutengeserana Mubatanidzwa weVashanyi Vanoshanda) naFranco Gattinoni weFTO (Federation of Organised Tourism) vese vanoratidza maitiro akanaka ekuda kwekushanya kwemumba uye vanokumbira hurumende kutsigira maitiro uye kuvhura makoridho evashanyi kubvumidza vatengi kuenda chero kwavanoda. Vati izvozvi vanogona kushanda muItari, Girisi neSpain, asi izvi zvinongova zvikamu gumi neshanu kubva muzana zvekutenderera kwekushanya kwakarongeka, uye chiitiko chinobuda chinobuda nemisika yekunze chakakosha.
Mukuvhara, Mutungamiri weBMT de Negri akati: “Iyi haisi tsika yechivanhu, asi kusangana kwemhuri, uko kuchapinda munhoroondo. Ndine rutendo rukuru mu Ministry of Tourism. Pasina iyo, chikamu chedu hachina ramangwana. Kukoka uku kutenda muhushumiri hwazodzoka. ”